लसुन खादा के फाइदा हुन्छ ? – BRTNepal
लसुन खादा के फाइदा हुन्छ ?
बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख २६ गते २०:०४ मा प्रकाशित
उनको तर्क छ, ‘लसुनले ग्याष्ट्रिक कम गर्ने मात्र होइन, स्वास्थ्यमा अनेकौँ फाइदा समेत पुर्‍याउँदो रहेछ’ ।
पौडेल जस्तै काठमाडौँ, पुरानो बानेश्वर निवासी सावित्री उपाध्याय समेत हिजो आज खाली पेटमा लसुन खाने गर्छिन् । चिकित्सक तथा छरछिमेकको सुझावमा लसुन खान थालेकी उनले लसुन खाएदेखि ग्याष्ट्रिक कम भएको महसुस गर्न थालेकी छिन् ।
आखिर, लसुनमा त्यसको के गुणु छ, जसले शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न मद्दत गर्छ ?
-लसुनमा एलिचिन नामक तत्त्व पाइन्छ, जुन औषधीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
-लसुनको सेवनले रुघाखोकी लगायतका बिमारी हटाउन मद्दत गर्छ ।
-लसुनमा एन्टीअक्सिडेन्ट तत्त्व हुन्छ, जसले अल्जाइमर, डिमेन्सियाजस्तो रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।